Xaflad lagu taageeray FARMAAJO oo lagu qabtay Magaalada Buffalo ee New York (SAWIRRO) | shumis.net
Home » News » Xaflad lagu taageeray FARMAAJO oo lagu qabtay Magaalada Buffalo ee New York (SAWIRRO)
Xaflad lagu taageeray FARMAAJO oo lagu qabtay Magaalada Buffalo ee New York (SAWIRRO)
Munaasabad Qaaraan Qaran ahayd laguna Taageerayay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu qabtay magaalada Buffalo, New York ee dalka Mareykanka, iyadoo ay ka qaybgaleen in ka badan 1,000 qof.
Xafladdan ayaa waxaa soo agaasimay dad taageersan waxqabadkii Farmaajo intii uu xilka hayay xilka Ra'iisul wasaaraha Somalia hayay, iyagoo goobta ka sheegay in Farmaajo uu rajada ummadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale, munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha Somali Bantu ee New York, Muunye Saalim Malande oo aad ugu dheeraaday Waxqabadkii intii uu Farmaajo ahaa RW-ha, wuxuuna si gaar ah ugu mahad-celiyay Maxamed Farmaajo, isagoo sheegay inuu geeyay shaqadii ugu horreysay 12-sano ka hor illaa iyo haddana uu ka shaqeeyo.
Waxaa isna xafladda ka hadlay C/qaadir Buube oo ku boorriyay Soomaali weyn inay ku taageeraan Maxamed C/llaahi Farmaajo daacadnimadiisa iyo waddani-nimadiisa, wuxuuna si xamaasad leh u sheegay in haddii ay reer Xamar yihiin ay aaminsan-yihiin in Farmaajo uu yahay mas'uulka keliya ee cadaalad ku hogaamin kara dalka.
Isagana waxaa xafladda ka hadlay Cawil Kaarshe oo sheegay in Somalida ku nool Buffalo, wuxuuna sheegay inay weli ku naaloonayaan hormarkii iyo wax-qabadkii Farmaajo u hor-seeday ka hor intii uusan noqon Ra’iisu Wasaare.
RW hore ee Soomaaliya, Maxamed C/llaahi Farmaajo oo Xafladda ka Hadlay ayaa wuxuu dadka ku booriyay in Qarannimada wax ka hooseeya aan la aadin hoosna aan looga dhicin Qarannimada, midnimadana la ilaaliyo. Sidoo kale Farmaajo wuxuu sheegay wuxuu uga duwan yahay siyaasiyiinta kale inaysan ahayn aqoon iyo caqli, balse ay tahay khibraddii uu soo maray oo ay ugu horreyso inuu kusoo barbaaray guri ay ka ifaysay Qaranimada Soomaaliyeed waalidkiisana ay howl-wadeenadii SYL ka mid ahaayeen.
Ugu dambeyn, dadweynihii xafladda kasoo qayb-galay ayaa aad uga helay heeso wadani ah ay ku luuqeynayeen qaar ka mid ah hobalada waabari, sida Faaduma Nakruuma, iyadoo xafladdu ay kusoo gaba-gabowday jawi farxadeed iyo xamaasad Soomaalinimo.
Title: Xaflad lagu taageeray FARMAAJO oo lagu qabtay Magaalada Buffalo ee New York (SAWIRRO)